geeridii-ina-boqor-tix-ka-dhalatay-filim-uu-nin-ingiriis-ahi-ka-sameeyay-qoyska-boqortooyada-sucuudiga-daawo – Djiboutination
HomeEntertainment geeridii-ina-boqor-tix-ka-dhalatay-filim-uu-nin-ingiriis-ahi-ka-sameeyay-qoyska-boqortooyada-sucuudiga-daawo geeridii-ina-boqor-tix-ka-dhalatay-filim-uu-nin-ingiriis-ahi-ka-sameeyay-qoyska-boqortooyada-sucuudiga-daawo
- March 29, 2015 - in Entertainment, NEWS2 367 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Tixdan oo magaceedu yahay “Geeridii Ina Boqor” waxa halabuuray macallinkii iyo maansayahankii Soomaaliyeed ee Maxamed Xaashi Dhamac “Gaarriye”, Allaah
naxariistii janno ha ugu deeqo e. Geeridii Ina Boqor waxay ka mid tahay maansooyinka ugu xiisaha badan, ugu na farshaxannimada sarreeya ee badweyntii maanseed ee halabuur Maxamed Xaashi Dhamac. Waxay soo baxday 13/4/1981. Buugga Hagarlaawe ee suugaanta Abwaan Gaarriye oo aannu weedhsan ahaan tixdan ka soo xigannay waxa uu Allaah ha u naxariistee Abwaan Gaarriye ku xusayaa sidan:
“Sannadkii 1981 ayaan waxaan daawaday filim uu nin Ingiriis ahi nin Ingiriis ihi sameeyey oo la magac baxay The Death of a Princess. Wuxuu kaga hadlayey qiso yaab leh oo uu la kulmay. Ninku Sucuudiga ayuu tegay 1976. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu ka qayb galay iyada oo gabadh reer boqor ah iyo nin ay is-jeclaadeen la dilayo. Si tuuga ah ayaanuu sawirro uga qaatay. Dambiga keli ah ee lagu soo oogayna wuxuu ahaa iyaga oo jabiyey xeerkii u yiillay qoyska dalkaas xukuma. Waxa xaaraan ah in qof reer boqor ihi ka guursado dadka kale ee caadiga ah. Arrintaas ayuu filimka ka sameeyey, isaga oo qaawinaya sida aanay isu lahayn, Islaamka ay sheeganayaan iyo waxay ku kacayaan. Xaajadaas, oo berigaas Ingiriiska iyo Sucuudiga iska hor-keentay, ayaan maansadan ka curiyey.”
Previous article Kenya:- “Reer Galbeedka Al-shabaab ayay nagu cabsiyaan Next article Warfaafin mise Sirfaafin About the author djibouti